Izityalo ezinobungozi zangaphakathi
Iyakhupha ifulethi phambi kokuba izityalo zangaphakathi zikhona. Bona, ubona, ubukeka buhle kwaye busebenza. Kwaye kwindlala ebusika uya kuhlala ujongene nekona lakho eliluhlaza. Kodwa abanikazi bezilwanyana ezifuywayo, ngakumbi iikati, izinja kunye neiproti bayazi ukuba le ndawo ingabandezeleka kwizilwanyana zabo okanye ezi ntandokazi zinokubandezeleka kwiintyatyambo. Siyaqonda indlela izilwanyana ezinokulimaza ngayo izityalo, kodwa njani inokulimaza kwenzeni? Yonke into ilula, kukho izityalo zangaphakathi eziyingozi, nokuba ziyingozi. Ngelishwa, akuzona zonke izilwanyana ezinobulumko bokungadli izityalo ezinjalo, kuba bonke bayazibuza kwaye konke okufunekayo bazame ngezinyo.
Izityalo ezisemngciphekweni ezisemngciphekweni zithathwa njengabameli bentsapho ye-aroids. Zihle kakhulu kwaye zibonakala zingekho nengozi. Ezona ziqhelekileyo zazo - i-philodendron, i-diffenbachia, i-colocaia kunye nezinye ezininzi.
Ezi zityalo ziqulethe i-juice enetyhefu, ezinokubangela ukuba izilwanyana zakho zivule i-larynx, kwaye ukuba zibanjwe emehlweni - utshintsho olungenakuguquka kwi-cornea. Ukuba ikati yakho idla isahlulo seqabunga le-monster, liya kuqala ukutshisa ulwimi, yonke imilenze kunye nomqala. Emva koko, i-blisters ibonakala. Yaye ukuba uyayigxotha iqela le-dienenbachia, ngoko ke ngaphezu kwento efanayo yokutshisa, unokuxhatshazwa. U-Liana ekubunjweni kwawo uqulethe ubuthi obunokuthi uqalise uhudo.
Akukho ncitshitshwenyeko kwizilwanyana zakho yintsapho ye-euphorbia, umzekelo, i-spurge kunye ne-croton. Abameli beli ntsapho baneenkunkuma eziqukethe izinto ezinobuthi. Ukuba isilwanyana sifunda esinye sesityalo, ukutyhefuza kuqinisekiswe ukuba kuya kubangela imiphumo enjengokutshisa, izilonda, ukuphofelwa kwesikhashana, ukuvutha komlomo womlomo kungase kwenzeke, umzila wesisu kunye nomgaqo wesifo unokuphazamiseka. Ezi zityalo zinokungadli. Emva kwakho konke, ngothinta omnye kubo, i-juice yabo ifika ngokukhawuleza kwesikhumba okanye kwi-membrane ye-mucous kwaye ishiya uphawu layo.
Intsapho yama-Amaryllas inokulimaza isilwanyana sakho. Ngokomzekelo, abameli abanjengo-hippeastrum, hemanthos, cleavia, eucharis, njl. Amagqabi, ama-peduncles kunye nezikali ze-bulbs kwiindawo ezininzi zezixhobo, eziyingozi kwimpilo, zinemivumba equlethe i-mucus eninzi, ebangela umonakalo. Le nto ifanayo isebenza kumalungu omyezo wale ntsapho, njengemhlophe-i-flowered, i-narcissus ne-galanthus.
Ukusika abalimi kunokulimaza isilwanyana sakho. Kwi-adenium, i-allamande, i-mandewille, i-catarrat, i-oleander, i-pachipodium kunye ne-rauvolphia, kukho ezininzi i-alkaloids kunye ne-glycosides. Xa ugxininiswe, unokukhupha ukuphulwa kwentliziyo kunye nomthetho wokutya. Kwaye, mhlawumbi, bayalimaza izilwanyana ezincinci ngakumbi, ngamanye amaxesha isiphumo esibulalayo siyabonwa.
Izilwanyana kunye neentaka zithandwa kakhulu kukugqatso kweziqhamo kunye neentyantyambo zezityalo zeSolanaceae. Lapha singabandakanya i-bralia, i-brusenfeldsiyu, i-brugsmansiyu kunye ne-solandra. Ngenxa yokuba baneentyatyambo ezintle, ziyaziwayo kwiindalo kunye nezityalo zendlu ezifana ne-petunia kunye nocuba ococekileyo. I-Bellaria kunye ne-mudope zihlala kwiindawo ezininzi ezingenanto kunye neenkunkuma. Kodwa bambalwa abantu bayazi ukuba zonke iinxalenye zezi zityalo ziqukethe i-alkaloids enobuthi. Ziyingozi kakhulu, zibangele ukucabisa, ukuhlanza nokulala.
Unyaka ngamnye, uninzi luya kuthiwa luye lwaziwa kwi-garden coniferous, kodwa kwimeko engqongileyo ungadibana nabameli abakhohlisayo. Kwixesha la mandulo, xa kwakudingeka ukuba ubethele umntu, wavunyelwa ukusela iwayini kwi-cut-cut cut from a tree tree. Kule sityalo, ubuthi buhanjiswe ngokungalingani. Apha kukho ukuthambekela ukuba inaliti, ekhulile, iqulethe ubuthi. Le toxin inokubangela ukucaphuka komzimba wesisu esiswini, ukuhlanza, isifo sohudo, kuya kuthintela kakhulu umsebenzi wentliziyo kwaye kunokuyeka ukuphefumla.
Iintyatyambo kunye neentyantyambo ze-hydrangeas nazo zingalimaza impilo, kuba ziqukethe i-cyanide ions, ezibonisa ubuthi bazo xa udibaniso lwenzeka ngamanzi okanye ematheni.
I-Fatsia iqulethe izinto ezinobungozi ezingabangela lula ukuphazamiseka kwenkqubo ye-nervous. Ioli efunekayo kwi-pelargonium iyacaphuka iimbumba ezincinci kwiintaka ezincinci. Yonke into eyaziwayo ithwala ingozi ekhethekileyo kwiigulane. I-aloe esiyithandayo kunye engenakulinganiswa ingakhokelela ngokukhawuleza ukuhlaselwa kwesifo sohudo malunga phantse nganye.
Ukuze izilwanyana zakho zingalimazi, kufuneka unciphise ukufikelela kwabo kwezityalo. Ukwenza oku, umane nje ufuna ukususa uh kumgama ongenakwenzeka okanye ukuphakama. Ukuba uhlala ekhaya inja okanye iigulane, kufuneka nje ukuxhamla iintyatyambo kunye nezityalo ezonakalisa ukuphakama okwaneleyo okanye uzibeke kwikhabhinethi. Ukuba ungumnini weentaka, kuya kubakho ukufihla iifestile zakho kwifestile kwaye uzivale ukuba ufinyelele ngamakhethini okanye usebenzise imfama ngenxa yale njongo. Kunzima kakhulu kubaphathi beekati eziqhelekileyo, kuba banako ukunyuka kunye nakwifestile kwaye bazame ukufikelela kwiipompo ezinqunyanyisiweyo naluphi na uhlobo. Kule meko, kufuneka uqaphele ngokukhethekileyo ukukhethwa kwezityalo ezintsha, okanye unike umntu izityalo ezinobungozi esele unayo.
Kodwa ukuba ufunde ngokukhawuleza ukuba kukho iindawo zokuhlala ezinobungozi, kwaye nokuba yingozi kakhulu kwimpilo yesilwanyana esineemilenze ezine, kwaye isilwanyana sakho esikuthandayo sifinyelele kwisityalo, udinga uncedo lokuqala. Kule meko, hlamba iimbumba zamanzi kwaye unike ilahleko ezisebenzayo ngamanzi amaninzi. I-thorny splinter kufuneka isuswe, kwaye ukuba inendawo ewonakele - yiphathe. Kodwa khumbula ukuba kufuneka uyifake kwi-vet ngokukhawuleza. Emva kwakho konke, isilwanyana sakho sasingadla isityalo esiyingozi xa ungekho ekhaya, kwaye, njengoko kwaziwa, kwiimeko ezinjalo ngeminithi iyabiza. Kodwa kunjalo, sincoma ukuba ulahlekise izityalo ezinje zangaphakathi, kuba azikwazi ukulimaza izilwanyana zakho kuphela, kodwa wena okanye wakho umntwana. Ebomini, konke kwenzeka, kwaye kungcono ukuba unokususa isizathu esinokwenzeka sokuba "zonke" ezivela endlwini yakho.
Njani ekhaya ukunyamekela intyatyambo yezalea?
Umfazi onesizungu onomntwana
Yintoni endingayipheka ngayo ngamaqabunga amaqabunga?
Ugcino lwentsapho lweVlad Topalov
Kutheni abafana bengakwazi ukwazana?
Iifake zentlobo yabasetyhini abahlobo
Ubaluleke kakhulu kunyaka wokuqala
I-Scarlet Johanson yayikhona